↑ Thandaunggyi Township Map, Myanmar Information Management Unit (MIMU)
↑ (၂၀၁၇၊ မတ်လ) သံတောင်ကြီးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ. အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန, ၃။
↑ (၂၀၁၇၊ မတ်လ) သံတောင်ကြီးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ. အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန, ၆။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သံတောင်ကြီးမြို့နယ်&oldid=473313" မှ ရယူရန်
၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၇:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။